Mpitondra HAT : MARO IREO NISARA-BADY -
AccueilRaharaham-pirenenaMpitondra HAT : MARO IREO NISARA-BADY
09/02/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tena aretin’ny mpitondra sy ny mpanao politika aty Afrika mihitsy ve ity mampaka-bady vaovao ity raha vao mahazo seza na voatendry amina toerana ambony? Maro tamin’ireo mpitondra Tetezamita tokoa mantsy no nisara-bady ary nampiakatra tovovavy ho solon’ilay akoho taman-trano. Saika nahitana ity tranga fisaraham-panambadiana ity avokoa ireo sokajim-pahefana rehetra nisy nandritra iny fitondrana HAT iny: mambra ny governemanta, ny CT sy ny CST, DIRCAB, SG, « chef de service », sns. Tsy ireo mpanao politika ihany anefa no tratran’ity viriosin’i Afrika ity fa indrindra koa ireo manamboninahitra sy mpitandro filaminana.
Maro amin’ireo ankohonana nilaozana no mizaka fahasahiranana mafy ankehitriny. Misy mihitsy moa ireo mijoro ho vavolombelona saingy ho fanajana ny fiainana manokan’ny olona no tsy hitononana azy eto amin’ny gazety. Nambaran’ity renim-pianakaviana iray ity fa tsy vitany intsony ny miantoka irery ny famelomana ireo zanany, tsy voaloa hatramin’ny saram-pianaran’ny ankizy. « Tsy vitan’ny hoe nandao ny tokantrano fotsiny fa tsy miraharaha ny adidy aman’andraikiny amin’ireo zanany. Izaho tenako izay nosoloiny tovovavy kely tsara tarehy tsy mampaninona ahy mihitsy fa ireto zanany kosa tsy tokony ho ampijaliana tahaka izao », hoy ity renim-pianakaviana iray ity. Nambaran’ity renim-pianakaviana ity ihany fa tena nitobaka tokoa ny vola nandritra iny Tetezamita iny saingy niserana fotsiny ihany izany…tonga ny « mpisolo toerana ».
Miandry an’i Marc Ravalomanana ho lany filoham-pirenena ireo mponin’i Toliara sy Fandriana omaly, nandritra ny fampielezan-kevitra nataon’ ny kandidà laharana faha-25. Nilaza ireo mponina, fa “tsy misy afa-tsy Ravalomanana Marc sisa no hany mpitondra antenaina ...Tohiny